ဆယ်လွှာပေါင်မုန့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဆယ်လွှာပေါင်မုန့်
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Aug 16, 2013 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Know-How, DIY | 24 comments
၁၀ လုံးရအောင်လုံး ထောပတ်သုတ်
ထောပတ်သုတ်ထားတဲ့ဗန်းထဲအသာထဲ့ မျက်နှာပြင်ထောပတ်သုတ် တလွှာပီးတလွှာထည့် ထပ်တိုင်းထောပတ်သုတ်
သူတို့တွေကတော့ Yemeni Honey Cake လို့ ခေါ်ပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ ၁၀ လွှာပေါင်မုန့်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ သကြားမပါပဲ အဆိမ့်လေးမို့ အချိုမကြိုက်သူများ နှစ်သက်မဲ့မုန့်လေးပါ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လက်နဲ့လုပ်ရင်လဲအဆင်ပြေပါတယ်။ ရိုးရိုးပေါင်မုန့်တွေလို မပင်ပန်းပါဘူး။
ပေါင်မုန့်ဂျုံ မုန့်လုပ်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ထောပတ် သို့မဟုတ် ဂီး မုန့်လုပ်ဇွန်း တ၀က်နီးပါး
ဆား လဘက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ရေ မုန့်လုပ်ဇွန်း တစိတ် နီးပါး
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရောစပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပြောင်ချောသွားအောင်နယ်ပါ။ ပြောင်ချောလာလျှင် ၁၀ ပိုင်းအညီအမျှပိုင်းပါ။ အပိုင်းများကိုအလုံးလေးများပြုလုပ်ပြီး ထောပတ် သုတ်ပါ။ ပလပ်စတစ်အသန့်နှင့် အ၀တ်သန့်ဖြင့်အုပ်ပြီး မိနစ် ၃၀ နှပ်ပါ။ မိနစ် ၃၀ ပြည့်လျှင် ဖုတ်မည့်မီးဖိုကို မီးကြိုဖွင့်ပါ။ ဂျုံလုံးများကိုတလုံးချင်း အ၀ိုင်းပြားဖြစ်အောင် ဒလိမ့်ဖြင့်လှိမ့်ပါ။ ဖုတ်မည့်ဗန်းကို ထောပတ်သုတ်ပါ။ ပြားထားသောမုန့်ချပ်ကို အသာခွာပြီးဗန်းထဲထည့်ပါ။ မျက်နှာပြင်ထောပတ်သုတ်ပါ။ တလွှာချင်းအထက်ပါအတိုင်း ၁၀ လွှာပြည့်အောင်လုပ်ပါ။ ( ၅ လွှာစီး နှစ်ဗန်းလုပ်လဲရပါတယ်။ ) နောက်ဆုံးအလွှာပြီးလျှင် ကြက်ဥအကာဖယ်ပြီးအနှစ်သုတ်ပါ။ နှမ်းနက်ဖြူးပါ။ မီးဖိုထဲ မိနစ် ၂၀ ခန့်ဖုတ်ပါ။ မျက်နှာပြင်ညိုလာလျှင် ဖိုထဲမှထုပ်ပြီး ပျားရည်နှံအောင်ဆမ်းပါ။ ကိုင်နိုင်လောက်သည့်အပူချိန်တွင် သုံးမြှောင့်ပုံလှီးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ချစ်သုဝေ နဲ့ အိမ်ထောင်လေး ဘာလေးကျ ဖြစ်ရင်တော့
ဒေါ်ဖွားမေ ဘက် လှည့်ရမှာပဲ
စားရ ဖို့ပဲ
ဒီ အစားအစာ ပြောပါတယ် ။
အေးပါအေ ချက်ခိုင်းမယ်ချက်ခိုင်းမယ်နဲ့ ဟိုလူရီးလိုတော့ချက်ကျွေးမယ်မဖြစ်စေနဲ့အေ။ အာဟိ သူမရှိတုန်း အတင်းပြောရဒါ။
အမဲသတို့ ဆီ လည်လည်လာမှ
လာခဲ့အေ။ အိမ်နီးနားချင်းဟင်းချက်ကောင်းတယ်ကြားတယ် လိုက်ပို့ပေးမယ်အေ
ကျောက်စ်က သနားလို့ မမန့်တာကို ကြည့်စမ်း… ရန်လာစပြီ ဟိ…
ဂျုံနယ် ၅လွှာထည့်၊ နုတ်နုတ်စဉ်းပြီး ကြက်သွန်နီ အနံ့အရသာနဲ့နယ် ရေခမ်းလုံး ထားတဲ့ အသားကိုထည့်…
ပြီးရင် နောက်ထပ် ၅လွှာအုပ်၊ အနားစတွေလိတ်၊ ထောပတ်သုတ်ပြီး အပေါ်မီးအောက်မီး ၂၅မိနစ် ဖုတ်လိုက်ရင်…
Meat Pie ကောင်းကောင်းရပါကြောင်း… Chedder Cheese အသားပေါ်ဖြူးထားရင် ပိုကောင်းပါကြောင်း…
ဟင်းနဲ့ မုန့်နဲ့ လဲစားမလား… ဟီ ဟိ
Pie က ဒီအသားမဟုတ်ကြောင်းလေးရယ်နှင့် နှင်းနှင့်မုန့်လဲစားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဲမွှားလုိ့ ဟင်းနှင့်မုန့်လဲစားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ စောင့်နေဘာမည်။
အလွှာတွေကြားမှာ cream တွေ ချောကလက် တွေ ထည့်လို့ ကတော့ ချို ဆိမ့် သွားမှာဘဲ။
ကျွန်မစက်ကသေးတော့ ၂၀၀ မှာ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားတယ်။ နောက် ၂၅၀ မှာ ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပီး ၂၀၀ နဲ့အပေါ်မီးဘေးမီးနဲ့ ခဏပြန်ထားတယ်။ စက်ပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကတော့ထောပတ်နံ့နဲ့အဆိမ့်လေးပေါ့။
ဂလုဒ် .. ဂလုဒ် …
ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ဆွဲပလိုက်ဂျင်ဒါ …
ပေါ့စိမ့်လေး တစ်ခွက်နဲ့ ရောဆွဲလိုက်ရင်
ဘီလောက် ကောင်းလိုက်လေမလဲ …
အင်း .. သာဒု .. သာဒု ..
အစားအသောက် ခေါင်းစဉ်အောက် ပြောင်းထည့်ပေးပါဗျို့… ဆယ်လွှာပေါင်မုန့်တော့ အသိဝူး.. ခုနှစ်လွှာချွတ်ကပွဲ သာမီးလေးတွေ ပေါင်တံဖွေးဖွေးကဒေါ့ စားဂျင်စရာဂျီး… ရှလွတ်….
မပြောင်းတတ်လို့ ပြောင်းပေးကြပါဗျို့။ အုကျောင်ကတော့ပေါင်ဒံဘဲစားဘာ.
ကော်ဖီပူလေး တစ်ခွက်နဲ့ ဆို ဂွတ်ပဲ
ဟုတ်အန်တီအိ စီးတီးမတ်လိုဟာမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ မုန့်ချင်ခွက်ခေါ်မှာပေါ့။ အရသာက ကြက်ဥနဲ့ ထောပတ်ပဲပါတော့ စားစားချင်း ဘာမှအရသာမရှိဘူး။ ၀ါးရင်းဝါးရင်းနဲ့ ထောပတ်နံ့လေးထွက်ပီး ကြက်ဥအရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးဆိုတော့ ကလေးတွေတော့မကြိုက်ပေမဲ့ လူကြီးတွေ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
အနော် လာလည်ရင် အိမ် ဝ ကနေ မုန့်လေးနဲ့ အသင့် ဆီးကြို မယ် ဆိုတာ ဒီ မုန့်နဲ့ကိုးးးး
အနော် က အစိမ့် မကြိုက်ဘူး မွသဲ။ နည်းနည်းလေး ချိုပေးပါနော်။
ဟုတ်ပါ့ လာခဲ့ သားကလဲအချိုကြိုက်တော့ နှစ်ယောက်စာ သကြားလေးနဲ့လုပ်ပေးမွယ်။
Food, Drink & Recipes ကိုပြောင်းထည့်ပေးပါဗျို့… နောင်လုပ်စားဂျင်ရင် ရှာရလွယ်အောင်…
သဂျီးရေ ပြောင်းပေးဘာဗျို့။ မပြောင်းတတ်လို့ရယ်
ယုစ့် သာ ဒါမိုးလုပ်ကျွေးမယ် ဆိုလို့ကတော့ ..
ဆီးချို အဖြစ်ခံပီးကို စားအူးမှာ ..
သကြားမပါလို့ဆီးချိုမဖြစ်ပါ။ စိတ်ချလက်ချသုံးဆောင်ပါ။ ကရင်မ၀တုတ်ကလေးဆိုရင်နီးစပ်လိမ့်မယ်။ ယုစ့်သာဆိုဒီတသက်စားရကိန်းမမြင်ပါကွယ်